Conjunctions by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
Conjunctions by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on June 24, 2013 at 13:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Conjunction ကို dictionary definition အရ " (grammar) word , e.g. and, but ,or or that joins words, phrases or sentences " ဟုဖွင့်ဆိုပါသည်။
Column B မှ Conjunction ၁၂ခုကို သုံး၍ Column A ရှိ ဝါကျ (1-12) နှင့် Column C ရှိ ဝါကျ (a-m) နှင့် တွဲဖက်၍ ဝါကျ ၁၂ကြောင်း ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအနေဖြင့် ဝါကျ 'o' ကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။
e.g. 0. because j
ဤ exercise ကို ပြုလုပ်ရန်မှာ discourse စာလုံးများ အဓိပ္ပါယ်ဆက်စပ်နေမှုကို နားလည်ပါက၊ သင့်လျော်ရာ conjunction ကို သုံးခြင်းဖြင့် sentence တခုကို လွယ်ကူစွာ တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
I was glad I wasn't born in France because I can't speakaword of French.
ဝါကျတခုစီကို ဖတ်ရှု၍ joke ကို နားလည်သဘောပေါက်ပါက English language learning တွင် ပို၍ Effective ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
1. The President has two books but he (the President) hasn't finished colouring the first one (the first book) yet.
(Discourse ကို လိုက်၍ matching လုပ်နိုင်ပါသည်။)
2. You know you're going old when people call you young-looking instead of young.
" going old " နှင့် "young-looking" မှာ discourse အားဖြင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ မြန်မာမှုပြုပါက " နုလိုက်တာ " ဟုပြောဆိုခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
3. I need to go to the opera whether I need to sleep or not သည် မြန်မာ situation တွင်လည်း ပွဲကြည့်ရင်း ပွဲခင်းတွင် အိပ်သည့်သဘောဖြစ်ပါသည်။
4. It is almost impossible to findadoctor who is poor even though there are plenty of poor doctors.
" ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ် " ဟူသည့် သဘောမျိုးဖြစ်ပါသည်။
5. Pauline doesn't care foraman's company ဟူသည့် စာကြောင်းတွင် "aman's company " မှာ ယောက်ျားသားတဦး၏ အဖော်ပြုမှုကို ဆိုလိုပြီး " unless he owns it " ဟုဆိုရာ၌ " it " သည် " company " ကို ရည်ညွှန်းသဖြင့် မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုသော " ကုပ္မဏီ " ဟု ဆိုလိုရာ " company " ချင်းတူသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်ခြင်းမတူညီပါသဖြင့် joke အဖြစ် meaning change ပုံကို သိရပါသည်။
6. Always keep your words nice and sweet (adj) စကားကို ကောင်းမွန်ချိုသာစွာ ပြောဆိုရန်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော်လည်း because you never know when you are going to have to eat them ဟူသည့်စာကြောင်းတွင် " them " သည် " sweets " (n) ချိုချဉ်သကြားလုံးကို ရည်ညွှန်းထားရာ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှုလွဲမှားပါက joke ဖြစ်သွားပါသည်။
7. When I wasachild, my family was so poor that the only thing I got on my birthday wasayear older ဟု မိသားစု၏ ဆင်းရဲပုံကို ဖွဲ့ဆိုရာ၌ birthday present အဖြစ် မည်သည်ကိုမှ မရရှိပဲ အသက်သာ တစ်နှစ်ကြီးသွားသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
8. A horse is something that can run like hell until you puta£20 bet on it. မြင်းအပြေးမြန်ပုံနှင့် မြင်းကို £20 ဖြင့် လောင်းပုံတို့ကို discourse ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
9. Don't talk to me while I'm interrupting! လူတစ်ဦးတစ်ယောက် စကားပြောဆိုနေစဉ် interrupt ကြားဝင်၍ စကားဖြတ်မပြောရပုံကို သရော်သောအနေဖြင့် " ငါစကားဖြတ်ပြောနေတုန်း ငါ့ကို စကားလာမပြောနှင့် " ဟု ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
10. I've got enough money to last me for the next ten years as long as I don't buy anything.
ငွေကို မသုံးစွဲပဲ နေနိုင်ပါက နောက်ဆယ်နှစ်စာ ဖူလုံသည်ဟု ဟာသနှောသော အားဖြင့် ငွေသည် မသုံးမဖြစ် သုံးနေရပုံကို ဆိုလိုပါသည်။
11. A woman stops telling her age as soon as " it " starts telling on her. ဒုတိယဝါကျတွင် " it " သည် " her age " ကို ရည်ညွှန်းသဖြင့် မြန်မာအသုံးအနှုန်းတွင် " အသက်က စကားပြောလာပြီ " ဟူ၍ ပြောဆိုမှုမျိုးဖြစ်ပါသည်။
12. Try to drive so that your driving licence expires before you do.
" driving licence " ယူပြီး ကားမမောင်းပါက အချည်းနှီး licence သက်တမ်းကုန်ဆုံးတတ်ပုံကို ဆိုလိုပါသည်။
Learning can be fun ဖြစ်ပါစေ။
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 3, 2013 at 12:55
Permalink Reply by Wai Phyo Oo on July 9, 2013 at 2:37
Permalink Reply by Soe Soe on July 11, 2013 at 20:48
Permalink Reply by ohnmar kyu on July 12, 2013 at 14:35